Kai Ken inu waa mid bulshada lagu wado, oo ah calaamadda 'DeFi token'. Ganacsi kasta, saddex hawlood oo fudud ayaa dhaca: Gubashada, Qaadashada LP, iyo Kobaca Horumarinta. Iyada oo loo marayo qaabkan astaamaha ah, mashruuca ayaa guud ahaanba looga faa'iideystey macaamil kasta oo kasta. Macaamilada Kai ken waxay waxtar u leeyihiin DHAMMAAN kuwa haysta.
Astaantan ayaa looga dan leeyahay in lagu abaalmariyo kuwa heysta isla markaana la ciqaabo iibiyeyaasha. Macaamil kasta, canshuuraha soo socda ayaa lagu dabaqayaa:
Marka maalgaliye iibsado calaamadda inta lagu jiro Iibinta Dadweynaha:
1% waxay tagtaa jeebka suuq geynta
1% ayaa tagaya LP
1% waxay gubeysaa cinwaanka jeebka
2% waxay u socotaa kuwa heysta
Marka maalgaliye iibiyo calaamadda inta lagu jiro Iibinta Dadweynaha:
2% - 7% ayaa loo hayaa dadka heysta iyada oo kuxiran Eth u dhigma wadarta iibka iibiyuhu sameyn doono. Qandaraasku wuxuu go'aamin doonaa Eth u dhigma oo ka saari doonaa% ee qaata kuwa haysta.
2% - 7% ee u socota dadka haysta macaamil kasta oo iib ah waa muuqaal aan cidina wali hirgelin. Astaantani waa mid gaar ah waana markii ugu horreysay ee lagu arko calaamaddan.
Tilmaamaha iyo cusbooneysiinta mustaqbalka:
Beer Ey. Tani waxay noqon doontaa barkadda beeraha ee LP. Kaiken INU waxaa lagu lammaaneyn karaa Eth, USDT iyo qadaadiic kale oo deggan si loo beero Kaiken INU badan. Kaiken INU sidoo kale waxay lashaqeyn doontaa astaamo kale oo dabagalka ah.
Dog house. Guriga eeyga ayaa noqon doona calaamo kale oo xaddidan marka lagu daro Kaiken Inu ee Beerta Eyga, waxay labanlaabi doontaa awoodda dabagalka.
Eeyo yaryar. Tani waxay noqon doontaa calaamo kale oo lagu kasban karo dabagalka Kaiken INU astaamo kale. Ey-yarahan loo yaqaan 'crypto puppy' ama waxay noqon doonaan NFT-yada la iibin karo
Cunto Eyga. Tan waxaa loo iibsan doonaa si loogu quudiyo Puppy Puppy si ay dhaqso ugu koraan.
Fiitamiinada eyga. Tani waxay noqon doontaa calaamo kale oo siin doonta nafaqo eey yaryar ee loo yaqaan 'crypto puppy'.
KAI Eco App. Tani waxay noqon doontaa barnaamijka rasmiga ah ee moobiilka ee Kaiken Inu project.
Iibinta Gaarka ah ee $ 7 halkii bilyan calaamadeed.
Hore-u-iibinta $ 10 halkii bilyan calaamadda illaa dxsale.
Iibinta Dadweynaha oo ah $ 12 halkii bilyan calaamadeed
% Qaybinta. Tani waxay khuseysaa oo keliya inta lagu jiro iibka dadweynaha, ma ahan iibka iibka ah iyo kan gaarka loo leeyahay.
Ujeeddadeenu waa inaan ka gudubno Kishu iyo Shib Inu marka loo eego dadka haysta iyo suuqa. Waxaan sameyneynaa tillaabooyin yaryar.
2021 Q3 1. Bilowga qaadashada
• Abuurista Websaydhka
• Bixinta Qandaraaska
• Abuurista Xisaabta Warbaahinta Bulshada
• Iibinta Gaarka ah
• Codsiga CG
• Codsiga CMC
• Horumarinta Boorsada Kai Eco
• CEX (liisaska 1-3)
• Horumarinta Beerta Eyga
2021 Q4 2. Wadahadal
• Bixinta Eyga Beeraha
• Liiska CEX (1-2 liisaska)
• Suuqgeynta Saameeyayaasha Warbaahinta Bulshada
• Bixinta Guriga Eyga
• Cusboonaysii Kai Eco Wallet
2022 Q1 3. Kobaca
• Kobcinta Crypto puppy
• Horumarinta Fiitamiinada Eyga
• Horumarinta Cunnada Eyga
• Liiska CEX (1 ee 5-ta ugu sarreysa)
• Cusboonaysii Kai Wallet
2022 Q2 4. Kulan
Dhammaan qaybaha ku rid meelahooda saxda ah oo bilow dhismaha KAI Ecosystem.
Iibinta Gaarka ah ee ICO
Lacagaha la Aqbalay
ma loo baahan yahay
Ma dooneysaa inaad liis garayso ICO-gaaga?
Liis garee ICO-gaaga maanta websaydhkayaga oo aan gaadhno kumanaan maal-gashadayaal oo ka socda adduunka oo dhan iyo sidoo kale, hadda waxaan bixinnaa kuwa ugu dhaqsaha badan Adeegga KYC ee ICO. Buuxi foomkeena xiriirka maanta waxaan kula soo xiriiri doonaa 24-ka saac ee soo socota.